Window7သမားများအတွက် ဇော်ဂျီ font | ZAW HLAING HTUN Computer Technology Sharing
ZAW HLAING HTUN Computer Technology Sharing
Copyright by:zawhlainghtun 2011
Window7သမားများအတွက် ဇော်ဂျီ font
Posted by zawhlainghtun on October 30, 2011
Window7သုံးပြီး ဇော်ဂျီဖောင့် သုံးမရလို့ မေးမေးလာတဲ့ စာဖတ်သူများအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ယခု ဖော်ပြပေးတဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့် Installer ကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။ ဒီဖောင့်က Window7မှာ အဆင်ပြေတယ် ပြောပါတယ်။ သုံးကြည့်ပါ။ မိမိအနေနဲ့တော့ မစမ်းထားတဲ့အတွက် မသိပါ။ Window XP ကို အသုံးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။ ဒီဖောင့် ကိုဒေါင်းပြီး အရင်ဆုံး Install လုပ်လိုက်ဗျာ ပြီးရင်တော အောက်မှပေးထားတဲ့လင့်ခ် ကိုဒေါင်းလိုက် ဒေါင်းပြီးရင် zip ဖြည်လိုက်ဗျာ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ setup ဆိုတာလေးကို doubel click နဲ့ Install လုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ…။ windows7 64bit နဲ့ zawgyi font ရိုက်လို့ မရတဲ့ပြဿနာတက်နေတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်… xp အတွက် ဇော်ဂျီ font က တော့ sidebar ရဲ့ ဘယ်ဖက်မှာရှိပါတယ် ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ window7အတွက်ကတော့ အခု အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်ခ်လေးက ဒေါင်းလော့ခ်ဆွဲလိုက်ပါခင်ဗျာ။ window7သမားတွေ အဆင်ပြေ ချောမွေ့နိုင်ကြပါစေသတည်း..။
← SpeedConnect Internet Accelerator v.8 – With Serial + Crack	wxPyDict English – Myanmar အဘိဓာန် →	26 responses to “Window7သမားများအတွက် ဇော်ဂျီ font”	aung kyaw myint	May 1, 2012 at 12:03 pm
g talk မှာ မြန်မာလိုရေးလို့ရပြီး ဟိုဘက်ကရေးတာကို ဖတ်လို့မရဘဲ တုန်းလေးတွေပဲ ပေါ်နေတယ်ဗျာ ။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပေးပါအုံး ။ window7ပါ
Reply	zawhlainghtun	May 4, 2012 at 4:08 am
အဲဒါကတော့ ၀င်းဒိုး ၇ မှာ 32 bit font လား 64 bit font လားဆို တာပြန်ကြည့်ရပါမယ်။ တစ်ခါတလေ window7ထဲမှာ zawgyi keyboard layout ကို နှစ်ခုလောက်ထပ်ပြီး install လုပ်ထားခဲ့မိရင်လည်း အတုံးလေးတွေပေါ်ပါတယ်။ ပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ကြည့်ပါ။
Reply	Ko Luni	July 5, 2014 at 5:31 am
how to correct myanmar fonts in torch browser?
မင်းသန့်	May 4, 2012 at 11:55 am
မန္တလေးတို့ လိုရိုက်ရင် တဝင်းပူ ကနောက် နည်းနည်းရောက်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Reply	zawhlainghtun	May 6, 2012 at 10:49 am
အဲဒါက ဇော်ဂျီမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ပြသနာလေးတစ်ခုပါ။ ကျနော့်စက်မှာလည်း အဲလိုတစ်ခါတလေပေါ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဇော်ဂျီရဲ့ စနစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ပြန်ဖြုတ်ပြီး ပြန် install လုပ်ပြီး သုံးကြည့်ကြည့်ပါ
Reply	hinhtat	August 16, 2012 at 7:29 am
Reply	hinhtat	August 16, 2012 at 7:31 am
Reply	nay myo	August 29, 2012 at 4:25 pm
Reply	zawhlainghtun	September 3, 2012 at 3:55 am
ိdownload attachment ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Click here to download your attachment. နှိပ်လိုက်ပါ
Reply	Aung Aung Sai	October 17, 2012 at 5:30 pm
g talk မှာ မြန်မာလိုရေးလို့ရပြီး ဟိုဘက်ကရေးတာကို ဖတ်လို့မရဘဲ တုန်းလေးတွေပဲ ပေါ်နေတယ်ဗျာ ။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပေးပါအုံး ။ window764bit ပါ
Reply	zawhlainghtun	October 21, 2012 at 4:53 am
64bit OS တွေက နည်းနည်းပြသနာရှိပါတယ်။ Gtalk ကို Uninstall လုပ်ပြီး ပြန် Install လုပ်ကြည့်ပါ။
Reply	sithu	November 30, 2012 at 3:23 pm
Reply	zawhlainghtun	December 2, 2012 at 11:12 am
ဘာနဲ့ဖတ်တာပါလဲ။ Microsoft Word နဲ့ဖတ်တာလား။ အဲဒါဆိုရင်တော့ စာသားအားလုံးကို Select လုပ်ပြီး Zawgyi font ပြောင်းလိုက်ပါ။ Notepad နဲ့ဆိုရင်တော့ Save လုပ်ကတည်းကနေ Save type မှာ Unicode စနစ်နဲ့ပြောင်းသိမ်းရပါမယ်။ ဒါမှ ပြန်ဖတ်တဲ့အခါ ဇော်ဂျီနဲ့ဖတ်လို့ရပါမယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ??? ပေါ်နေပါလိမ့်မည်။
Reply	myat	December 16, 2012 at 2:56 am
win7g talk မှာ မြန်မာလိုမပေါ်ပဲ လေးထောင့်အတွက်လေးတွေပဲပေါ်နေလို့ပါ ဇော်ဂျီင်္ နဲ့ ဂျီတော့ ကိုလည်းပြန်တင်တာ2ခါ 3သုံး ခါ၇ှိပီ မရသေးဘူး ကူညီပါဦး 32 bit ပါ အဆင်ပြေရင်မေးပို့ပြီးဖြေပေးပါနော်
Reply	zawhlainghtun	December 18, 2012 at 9:57 am
Gtalk ရဲ့ Setting ထဲက General ထဲက Change Font မှာရော zawgyi one ဆိုတာကို ပြောင်းပြီးပြီလားမသိပါ။ အဲလိုပြောင်းလုိ့ လေးထောင့်ပေါ်နေသေးတယ်ဆိုရင် ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ https://sites.google.com/site/bloggerzin/Zawgyi_Keyboard.rar?attredirects=0&d=1 အခုပေးထားတဲ့လင့်ခ်က ဇော်ဂျီကို ဒေါင်းပြီးတော့ ပြန်သွင်းလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ
Reply	linlin	March 30, 2013 at 5:48 pm
၀င်းဒိုး၇ သုံးရတာ အဆင်ပြေပါတယ် အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက ၀င်းဒိုး၇ ၃၂ဘိုက်ပါ မြန်မာစာရေးလို့လဲရပါတယ်
ဖိုင်အားလုံးလဲမြန်မာစာပေါ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဖိုင်နာမည်ကို search Conputer ဘားပေါ်ကရှာလိုက် အတုံးလေးတွေပဲပေါ်တယ်
ဇော်ဂျီတွေလည်းစုံပါပြီ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပါဦး
Reply	zawhlainghtun	April 8, 2013 at 1:36 am
search computer ဘားပေါ်ကနေ ဖိုင်တွေကို ရှာလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဇော်ဂျီနဲ့ရိုက်လိုက် လို့ အတုံးလေးတွေပဲပေါ်တာပါ။ ဖိုင်နာမည်တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုပေးတာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ရှာရလွယ်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့်တွေက မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့အတွက် ၀င်းဒိုးကို အထောက်အပံ့ ပေးရာမှာ အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ အင်တာနက်သုံးရုံ ဂျီတော့ခ့်ပြောရုံအတွက်တော့ ဇော်ဂျီက အဆင်ပြေမှာပါ။
Reply	ngal	May 1, 2013 at 5:12 am
Reply	zawhlainghtun	May 18, 2013 at 11:52 pm
နဂိုမူရင်း ဇော်ဂျီကို uninstall လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အသစ်ပြန်သွင်းလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။
Reply	အောင်ဆန်း	October 21, 2013 at 8:49 pm
ကျနော်က အေဆာအက်စ်ပိုင်းယား ဗွီ ဖိုက်၊ ၀င်းဒိုး ၇ ၆၄ ဘက်သုံးပါတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ် မပြောတတ်ဘူး။ အင်္ဂလိပ် လို ပြန်ပြောင်းလို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်။အန်အင်စတော လုပ်တော့လည်း ဒက်ဖော့ဖောင့် ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး လုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ကူညီပါအုံး။
Reply	zawhlainghtun	April 17, 2014 at 9:17 am
window 64 bit ကြောင့်ပါ
Reply	zawmoe moe	December 6, 2013 at 12:43 pm
ဟုတ်ကဲ ကျနော် စာရေးရတာအင်္ဆမပြေဘူး ငသတ်ကိုရုာရေးလို့မရဘူး
Reply	too	December 22, 2013 at 12:55 pm
Reply	too	December 22, 2013 at 12:58 pm
Reply	nay	September 20, 2014 at 3:03 pm
Reply	လိုအပ်သည့် အကူအညီများအတွက် စာပြန်ရန်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ ဖော်ပြပေးရန် Cancel reply	Enter your comment here...
ကဏ္ဍအလိုက် ရွေးချယ်ရန်ကဏ္ဍအလိုက် ရွေးချယ်ရန်
IT News (53)
Cloud System (3)
IT Stars (1)
Remote Study (1)
Security Study (21)
Special Choice (22)
Windows Study (5)
Music for Life (9)
design making (4)
Video Edit (5)
Window OS (5)
မရှိမဖြစ် Fonts Download
E-Books ဖတ်ရန် Font Download IT Magazines & Journal
အီးမေးလ်ထားခဲ့ပါ Post အသစ်တင်တိုင်း ပို့ပေးပါမည်
ကြိုက်ရင် Like ပေးခဲ့ပါ	ကြိုက်ရင် Like ပေးခဲ့ပါ
Post များ ပြန်လည် ဖတ်ရှုရန်	Zaw Hlaing Htun.apk Update အသစ်လေးပါ
Zaw Hlaing Htun.apk for Android Version Phone
Joomla Website အတွက် အခြေခံပြင်ဆင်မှုများ နှင့် google apps နှင့် domain name ချိတ်ဆက်ခြင်း (မိုးမြင့်ရှိန်- ရေးသားသည်)
Android Internet Setting ချိန်နည်း။
Introduction to Java Programming (Vo Da Kar and Star Tek တင်ပြသည်)
Power Supply ကိုMeter တိုင်ခြင်း
Power Supply ဗဟုသုတလေးတွေ (SilverStone Strider Power Supply အကြောင်း)
Power Supply ဗဟုသုတလေးတွေ (Seasonic S12-II 500W Power Supply)
Power Supply ဗဟုသုတလေးတွေ (Seasonic X-750 Gold Power Supply)
ASP.NET လေ့လာကြမယ် – ထင်လင်းအောင် ရေးသားသည်
Android Phone အား Root လုပ်နည်း( Android User Guide )Chateau Man ရေးသားသည်
Android Phone အား Root လုပ်နည်း( Android User Guide ) သူရ ရေးသားသည်
Basic Electricity and Safety
Internet Cache ကိုရှင်းလင်းခြင်း
Command Line မှတစ်ဆင့် DHCP ကို Install လုပ်ခြင်း
Squid Proxy Service ကို Run ပုံအကြောင်း
ဖုန်းရေထဲ ကျသွားရင်ဘာတွေလုပ်မလဲ ?
ယနေ့ လာရောက်ကြသူများ	စုစုပေါင်းလာရောက်သူ	93,149 ယောက်
ဆက်သွယ်ရန်	merchant street, sittwe, rakhine+959421765666နည်းပညာအခက်အခဲများအတွက် ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းနိုင်သလို zawhlainghtun@gmail.com သို့ စာရေးသား မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Myanmar E-Booksကျော်စွာ၁၀၀ (best quality typing pdf small size) February 3, 2016Freedom from Fear January 11, 2016အစ္စလာမ်ဟူသည် အဘယ်နည်း January 4, 2016Spoken English Short And Easy December 22, 2015English Speaking For Everyone December 22, 2015ဆုပေး ရေစက်ချအမျိုးမျိုး December 14, 2015 Unknown FeedAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.	RFA Burmese Newsမြန်မာ့တပ်မတော် လေယာဉ်ပျက်ကျ လိုက်ပါသူ ၅ ဦးလုံး သေဆုံးလှည်းတန်းဈေးသည်တွေကို စည်ပင်က မတရား အရေးယူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၁၀၁ နှစ်ပြည့်ပွဲ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ခွင့်မပြု Movie & Videoချစ်တင်းနှောရင်း ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတာဟာ အိမ်ထောင်ရေးသုခ ပြည့်ဝစေ February 10, 2016အရက်သောက်ခြင်းက HIV ရောဂါပိုးရှိနေတဲ့ လူတွေကို ပိုပြီး သက်တမ်းတိုစေ February 10, 2016ကလေးသေးခံ Diaper အပူလောင်ခြင်း February 9, 2016ငှက်ပျောခွံကို စမ်းသပ်ပြီး အရေပြားကင်ဆာကို ခြေရာခံနိုင်ဖို့ ပညာရှင်တွေ စီစဉ် February 9, 2016အားကစားသမားတွေအပေါ် သက်ရောက်လေ့ရှိတဲ့ နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ လေ့လာတွေ့ရှိ February 8, 2016မျက်နှာသစ်ရာမှာ သတိထားရမယ့်အချက်များ February 8, 2016	Myanmar MobileAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.	MRTV4An error has occurred; the feed is probably down. Try again later. MyawadyAn error has occurred; the feed is probably down. Try again later.	↑ Top